अस्ताए न्यायका प्रतिमूर्ति | चितवन पोष्ट
अस्ताए न्यायका प्रतिमूर्ति
ज्ञान, विज्ञान र विधिशास्त्रका भण्डार मानिएका भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक एवम् जनताका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेको ५६ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको छ । जीवनभर अरुकै मानवीय सेवा र सामाजिक परोपकारमा समर्पित काफ्ले लामो समयदेखि मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए । विगत केही महिनादेखि अस्वस्थ रहेका उनी निमोनियाबाट पनि पीडित भएपछि बिहीबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयू कक्षमा उपचारका लागि लगिएको थियो । तर, चिकित्सकले उनलाई बचाउन सकेनन् । उनको शुक्रबार राति नौ बजे निधन भएको थियो । काफ्लेको पार्थिव शरीरलाई शनिबार शिक्षण अस्पतालमा श्रद्धाञ्जली सभा गरी पशुपति आर्यघाटमा छोरी गरिमाले दागबत्ती दिएकी छन् । गरिमाले नै माडीमा उनको काजक्रिया गर्ने बताइएको छ । कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका बाबजुद पनि उत्पीडनमा परेका जनताको सेवामा समर्पित उनले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कहिल्यै ख्याल गरेनन् । आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा बढी ती गरिब, विपन्न र अन्यायमा परेका मानिसलाई न्याय दिलाउने ध्येय उनको थियो । महान् मानिसहरु आफ्नो ख्याल राख्दैनन् र परिवारको वरपर पनि रमाउँदैनन् । सोही कारण उनका श्रीमती र छोरी चितवनमा रहे पनि उनी एक्लै काठमाडौँमा रहँदै आएका थिए । सधैँभरि मुद्दाको पैरवी र सार्वजनिक हितका विषयमा सोच्ने काफ्ले जीवनको अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि कानुनी स्वयम्सेवामै तल्लीन रहे ।
वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरका भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक रहेका उनी प्राध्यापनभन्दा वकालतमै आफूलाई समर्पित गरे । कहिल्यै लोभ, मोह र अहंकारजस्ता विकारमा नलागेका उनले गरेका सामाजिक न्यायको ग्राफ जति लेखे पनि थोरै हुन्छ । २५ वर्षअघिदेखि मुद्दाको बहस पैरवी गर्दै आएका काफ्लेले संवैधानिक अदालतबाट उत्पीडनमा परेका ०६६ सालका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन मह¤वपूर्ण योगदान गरे । सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, पाटीपौवा आफ्नो बनाउनेहरुबाट जग्गा फिर्ता गरी भू–संरक्षण, वन, वातावरणलगायतका मुद्दा–मामिलाहरुमा बहस गरेर न्याय दिलाउन काफ्ले सरले कडा मेहनत र पसिना खर्चेका छन् । वकालत गरे पनि उनी कहिल्यै पैसाको पछि दौडिएनन् र लोभलालचमा फसेनन् । सरल र सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत गर्दै आएका स्वाभिमानी व्यक्तित्व काफ्ले सरले आफ्नो स्वभावअनुसार विधिशास्त्र, कानुन र मूल्यमान्यतामै अडिग र अविचलित रहेर वकालत गरिरहे र पीडितहरुलाई निरन्तर न्याय दिलाइरहे । उनी यतिसम्म सच्चा न्यायमूर्ति थिए कि अन्यायमा परेका पीडित व्यक्तिहरु खोजेर आफैँले खर्चसमेत गरेर पनि मुद्दा लडेर न्याय दिलाएका थिए । उनले अन्यायमा परेका मानिसको उत्थानका निम्ति ०६३ सालमा पुनरूत्थानवादी शक्ति समूहसमेत स्थापना गरेका थिए । सो संगठन ६३ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । काफ्लेले दायर गरेका संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरु अब पार्टीले अघि बढाउने जनाएको छ ।
२०१९ असार १९ गते माडीमा जन्मिएका काफ्लेजस्ता राष्ट्रका अमूल्य निधिको देहावसानको खबरले यतिबेला लाखौँ जनता धरधरी रोएका छन् । आजको युगमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो राख्ने बिरलै मानिस छन् । व्यक्तिगत लोभलालच र कमाउने दौडमा लागेको आधुनिक समाजले काफ्ले सरको निस्वार्थ सेवाबाट केही सिक्नुपर्छ । न्याय कसैको पनि पहुँच र प्रभावबाट टाढा नहोस् भन्ने महान् सोच राख्ने काफ्लेले ०६७ सालमा विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई राज्यबाट न्याय दिलाए, चितवन मावि भरतपुरको जग्गामा बनेका भवनहरु भत्काउन सर्वोच्चबाट फैसला गराए, बाढीपीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाए, देशभरका सुकुमबासीहरुको मुद्दा जिताए, गरिब जनताका निम्ति सत्यको जित हुँदोरहेछ भन्ने अनुभूति दिलाए । त्यतिमात्रै होइन, उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक्लैले ४०० भन्दा बढी निवेदन र उजुरी दिएका थिए, जसमध्ये बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठले गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग एक दृष्टान्त हो । यसअघि चितवन बारका उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका अधिवक्ता काफ्लेको निधनले देशवासीलाई नै ठूलो क्षति पुगेको छ । कानुनी र न्यायिक लडाइँ लडेर युगौँसम्म देशवासीलाई ठूलो गुन लगाउने उनको सदा स्मरण भइरहने छ । न्यायपूर्ण समाजका पक्षपाती काफ्ले सरप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
बढ्दो सम्बन्धविच्छेद चिन्ताको विषय
छापा मार्ने शैली बदलौँ